"လက်ရှိခန္ဓာ မတွယ်တာနှင့်၊ နောင်လာဘဝ၊ မတောင်းတဘဲ၊ ကြောင့်ကြစွဲဖြင့်၊ အမြဲမပြတ်၊ ဝိပဿနာ၊ လေ့လာကြိမ်ကြိမ်၊ အာစိဏ္ဏကံ၊ ဖြစ်ကြောင်းဖန်မူ၊ ထိုသည့်သူကား၊ အယူမလွဲ၊ ဂတိမြဲ၏။(မိုးကုတ်ဆရာတော်) "
၉၆၉-ဆိုတာ ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူး။ သူများဘာသာကို လိုက်ပြီးတုနေတာလို့ ပြောတဲ့သူတွေအတွက် သိစေချင်လို့။ ၉၆၉-ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လဲ?
ဘာသာတိုင်းမှာ သူ့ သင်္ကေတနဲ့သူ ရှိကြပါတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာမှာ အထွဋ်အမြတ်သင်္ကေတဟာ-ဥုံ-ဆိုတဲ့ စာလုံးပါပဲ..အဲဒီ ဥုံဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ ဘုရားသုံးဆူဖြစ်တဲ့ ဗြာဟ္မဏ၊ သျှီဝ၊ ဗိဿနိုးကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ စကားလုံးဖြစ်တယ်။ ဥုံ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကားမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ရေးထားရင် ဒီကားဟာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ကား ဒီအိမ်ဟာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ပဲလို့ သိကြရတယ်.....ခရစ်ယာမ်ဘာသာမှာ ရေရှုခရစ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အနေနဲ့ လက်ဝါးကတ်တိုင်ကို အထွဋ်အမြတ်ထားကြတယ်...လက်ဝါးကတ်တိုင်ကို လိုင်မှာ ဆွဲထားရင် သူဟာ ခရစ်ယာမ်ဘာသာဝင်ပဲလို့ သိကြရတယ်။ အိမ်ရှေ့မှာ လက်ဝါးကတ်တိုင် ထောင်ထားတာနဲ့ ခရစ်ယာမ် အိမ်ပဲလို့ အသိအမှတ်ပြုကြရတယ်။ မူစလင်ဘာသာမှာလည်း 786 ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အထွဋ်အမြတ်ထားကြတယ်။ လခြမ်းတံဆိပ် သင်္ကေတကို အသုံးပြုကြတယ် အဲဒါ အပြစ်လို့ ဆိုဖွယ်ရာ မရှိသလို ...သူ့ဘာသာနဲ့သူ သင်္ကေတလေးတွေပြုပြီး ဘာသာဝါဒတွေကို ထိန်းသိမ်းကြတယ် စည်းရုံးကြတယ်။ အဲဒါတွေဟာ အတုယူစရာဖြစ်ပါတယ်။ အတုယူစရာလည်းကောင်းပါတယ်။ ခု ဗုဒ်ဓဘာသာမှာ သင်္ကေတ ပြုစရာ မရှိတော့ အရဟံ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးပြီး အိမ်တွေမှာ ရေးကြပြုကြရတယ်။ ဒီလို ကပ်ရမယ် ပြုလုပ်ရမယ်လို့ ဘုရားရှင်က မဟောခဲ့ပေမယ့်လဲ ငါတို့ဟာ ဗုဒ်ဓဘာသာပါဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ဘုရားဂုဏ်တော်ကို အထွဋ်တင်ပြီး ဘုရားရှင်ကို ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ စကားလုံးအဖြစ်နဲ့ အရဟံ စကားလုံး သုံးနှုံးကြရတယ်။ ထို့အတူ သာသနာ့အလံတော်ကို ပြုလုပ်ရမယ်လို့ ဘုရားရှင် မဟောခဲ့ပါဘူး...ဒါပေမယ့် အမေရိကန် ရေတပ်ဗိုလ်မှုးကြီးတစ်ယောက်က ဘုရားရှင်ရဲ့ ရောင်ခြည်တော် ခြောက်သွယ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အနေနဲ့ သာသနာ့အလံတော်ကို အရောင်ခြောက်မျိုးနဲ့ ပြုလုပ်ရရင် ကောင်းမှာပဲလို့ အကြံဖြစ်ပြီး တီထွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ယနေ့အချိန်ထိ သာသနာ့အလံတော်ဟာ သာသနာတော်ကြီးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အနေနဲ့ အောင်လံတလူလူ လွှင့်ထူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားဟောခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလို့ လက်မခံနိုင်စရာမရှိသလို ငြင်းပယ်ရန်ကော ရှိသေးလို့လား။ ရှေးကပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ပညာရှင်တွေကို ဘယ်လောက် ဂုဏ်ပြုစရာကောင်းသလဲ။ကျေးဇူး အကြိမ်ကြိမ် အခါအခါ တင်ရမှာပါ။ ဘုရားမဟောဘူးဆိုပြီး သာသနာအလံတော်ကို မသုံးသင့်တော့ဘူးလား။ စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ အသောကမင်းကြီးဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကို ဓမ္မစက္ကပ၀တ္တနသုတ်ကို သင်္ကေတပြုပြီး လှည်းဘီး သဏ္ဍန် သင်္ကေတပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားက ဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ မဟောခဲ့ပေမယ့် အဲဒါတွေဟာ အတုယူစရာတွေပဲပေါ့။ ခုလည်းပဲ ၉၆၉ ဆိုတဲ့ သင်္ကေတဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဗုဒ်ဓဘာသာများအနေနဲ့ အတုယူစရာ အချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ်ဓဘာသာအိမ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကပ်ထားရင် အန္တရာယ်ကင်းပြီး ကံတောင် ပွင့်လင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဘုရားဂုဏ် တရားဂုဏ် သံဃာဂုဏ်တော်တွေကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ သင်္ကေတ ဂဏန်းတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ သူများဘာသာကို အတုယူတွေပြောပြော “ ကောင်းတာဆို ယူရမယ်။ မကောင်းတာ ပယ်ရမယ်”ဆိုတာ ဘုရားရှင်ရဲ့ဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးအနှုံးတွေဟာ သူတပါးကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ မဟုတ်သလို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်လူမျိုးတွေဟာ စည်းလုံးစေရန်အတွက် ကိုယ်စားပြုတဲ့ သင်္ကေတသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အတွေး မမှားသင့်ပါဘူး။ ဒီလို ၉၆၉ ကိုသုံးလိုက်သောအားဖြင့် ကိုယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာ စည်းလုံးမှုရှိလာမယ်။ ငါ့တို့ဟာ ကိုယ့်ဘာသာကို ချစ်မြတ်နိုးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိလေး ၀င်လာမယ်။ အဲဒါ စည်းလုံးမူပါပဲ။ နွားကွဲရင် ကျားဆွဲတယ် ဆိုတဲ့ စကားမပာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရေအတွက် အလွန်နည်းပါးလှတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ စည်းလုံးမှုမရှိရင် မကြာခင် သာသနာ ကွယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ စည်းလုံးမှု အင်အားမရှိခဲ့လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး မကြာမီ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရပါတယ်။ အခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလဲ ထိုနည်းတူစွာပါပဲ။ ဒါတွေဟာ သံဝေဂယူစရာ၊ သတိထားစရာအချက်တွေပဲ မဟုတ်ပါလား။...ကျေးဇူးကြီးမားတော်မူသော မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်တာကိုပဲ အားလုံးသတိရစေချင်ပါတယ်.....ဆရာတော်ကြီးက သူ့ကျောင်းတိုက်မှာ ကျောင်းဆောက်တဲ့အခါ ပစ္စည်းဝယ်လာတဲ့ ကျောင်းဒကာတွေကို မေးတယ်။ မင်းတို့ ဒီပစ္စည်းတွေကို ဘယ်ဆိုင်က၀ယ်လာတာလဲလို့မေးတဲ့အခါ ကုလားဆိုင်က ၀ယ်လာတာ ဘုရားလို့ ဖြေကြတယ်။ ဘာလို့ဝယ်လာတာလဲလို့ ထပ်မေးတော့ ဈေးသက်သာလို့ လို့ဖြေကြပြန်တယ်။ ဆရာတော်ကြီး ထပ်မိန့်ပြန်တယ် မင်းတို့က ဈေးသက်သာတာပဲ သိတာလား။ ကုလားဆိုင်မှာဈေးဝယ်ရင် မင်းတို့ဝယ်လိုက်တဲ့အမြတ်အစွန်းဟာ ကုလားဗလီကိုပဲရောက်မှာပေါ့။ သူ့ဘာသာပဲ ကောင်းစားမှာပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်မှာ ဈေးကြီးပါစေ ၀ယ်ရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်မှာ ၀ယ်ရင် သူတို့မြတ်တဲ့အမြတ်အစွန်းဟာ ဘုရားကျောင်းကန်စတဲ့ သာသနာတော်အတွင်းမှာ အသုံးပြု လှူဒါန်းကြမယ် ဒီလိုဆို မင်းတို့လည်း ကုသိုလ်ရတာပေါ့ လို့ ဆရာတော်ကြီး မိန့်ကြားပါတယ်။ အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။
၉၆၉-ဆိုတဲ့ ပြဿနာကို အငြင်းမပွါးကြပဲ..သဘောထားကြီးစွာ နားလည်နိုင်ကြပါစေ
Posted by ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်နန္ဒသာရ at 12:09 AM No comments: Links to this post
နိုင်ငံကျော် ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခြင်း
ဓမ္မကထိကအကျော် ဒယ်အိုးဆရာတော်နဲ့ ဆုံတွေ့စဉ် တရားတွေဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်
စာရေးဆရာ ရဝေနွယ်(အင်းမ) ဆရာတော်နဲ့ ဆုံတွေ့စဉ်
Posted by ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်နန္ဒသာရ at 10:26 PM No comments: Links to this post
Buddha-Gaya မြေမြတ်မဟာအရပ်က စာရေးသူ သီတင်းသုံးနေထိုင်ရာ အခန်းလေး
Posted by ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်နန္ဒသာရ at 10:16 PM No comments: Links to this post
Posted by ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်နန္ဒသာရ at 10:08 PM No comments: Links to this post
မြတ်ဗုဒ္ဓ သစ္စာဥာဏ်အလင်းကို ရရှိခဲ့တဲ့နေရာ ဗုဒ္ဓဂယာ၊ မဟာဗောဓိပင်ရဲ့စနေထောင့်အရပ်က ခရေပင်လေးဟာ ဇူလိုင်လမိုးစက်တွေနဲ့အတူ ဖူးပွင့်ဝေဆာလျက် မြတ်ဗုဒ္ဓကိုပန်းရနံ့လေးတွေနဲ့ အားပါးတရပူဇော်နေပါတယ်။
ဇူလိုင်လရဲ့ရာသီဥတုဟာ ဗုဒ္ဓဂယာဧရိယာမှာ သာယာလှတာကြောင့် ဘုရားဖူးကြွရောက်လာတဲ့ ပရိသတ်တွေကို စိတ်ရွှင်လန်းစေသလို မဟာဗောဓိပင်ကြီးကလည်း ရွက်ဟောင်းတွေကြွေပြီးလို့ ရွက်သစ်တွေနဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြေနေတဲ့အချိန်၊ မဟာဗောဓိပင်ကြီးကိုဖူးမြင်ရသူတွေအဖို့ စိတ်ဘဝင်မှာအေးမြစေပါတယ်။
အရှေ့ကနေ နေရဉ္ဇရာမြစ်ကိုဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာတဲ့ လေပြေလေညှင်းတွေကလည်း ခရေပင်
လေးကိုတိုးဝှေ့လှုပ်ခတ်နေ၍ ခရေပန်းရနံ့တွေကိုသယ်ယူပို့ဆောင်နေတာမို့ မဟာဗောဓိပင်ရဲ့အနီးတစ် ဝိုက်မှာခရေပန်းရနံ့တွေကမွှေကြိုင်သင်းပျံ့နေပါတယ်။
ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်၊စက်တင်ဘာလတွေမှာ အိန္ဒိနိုင်ငံတဝှမ်းက ဗုဒ္ဓဂယာကိုဘုရား
ဖူးလာကြတဲ့သူတွေ၊ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတဲ့ မိဘ ဘိုးဘွား ညီအစ်ကို မောင်နှမ ဆွေမျိုး ဥာတကာတွေကို ဗလိနတ်စာကျွေးပြီး အမျှအတန်းပေးဝေဖို့ လာရောက်ကြတဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဂဟာမှာ ပရိသတ်တွေအလွန်စည်ကားလို့နေပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဂယာဟာ ဘုရားအဆူဆူပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့နေရာဌာနဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ ကမ္ဘာတ
၀ှမ်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေ အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က ဗုဒ္ဓဂယာကို ဗောဓိမဏ္ဍ၊ ဗောဓိရုက္ခမူလ၊ ဗောဓိသမီပ၊ ဂယာ၊ ဂယာသီသ လို့ခေါ်ခဲ့ကြပြီး ပါဠိတော်မှာ ဥရုဝေလလို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ ဆယ့်သုံးရာစု နောက်ပိုင်းမှာမှ ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူတဲ့နေရာကို ဗုဒ္ဓဂယာလို့ ကျောက်စာတွေမှာ ရေးသားလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဂယာမြို့ရဲ့အနီးမှာ ဗုဒ္ဓဂယာ၊ ဗြာဟ္မဂယာရယ်လို့ နေရာ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဂယာဟာ ဂယာမြို့နဲ့ ကီလိုမီတာ သုံးဆယ်လောက် ကွာဝေးပြီး ဗြာဟ္မဂယာဆိုတဲ့နေရာကတော့ ဂယာမြို့ရဲ့အနီး ဂယာသီသတောင်တန်းကြီးရဲ့အရှေ့ဘက်နေရဉ္ဖရာမြစ်ရဲ့ အနောက်ဘက်ကမ်းနံဘေးကကျောက်တုံးကြီးပေါ်မှာ ဗြာဟ္မာမင်းကြီးရဲ့ခြေရာရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ယူဆထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေ အယူအဆအရ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်သေသွားတဲ့အခါ သူ့အတွက် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေက ဆုတောင်းအမျှဝေရပါတယ်။ အမျှဝေလိုက်တဲ့အခါ သေသွားတဲ့သူဟာ ဘုတ်ပြိတ္တာဘ၀မှ ကျွတ်လွတ်သွားပြီး ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှာလည်း တာဝန်ကျေပွန်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျှဝေတာကို ဗုဒ္ဓဂယာမှာ တကြိမ် ဗြာဟ္မဂယာမှာ တကြိမ် နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရမယ်လို့ ပုဏ္ဏားဆရာကြီးတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဂယာကို ဘုတ်ပြိတ္တာတွေအတွက် အမျှအတန်းပေးဝေတဲ့နေရာတခုလို့ သတ်မှတ်ပြီး ‘ဘူတဂယာ’ လို့ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ ဗုဒ္ဓဂယာကို ဂယာမြို့ရဲ့အနီးမှာ ဘုရားရှင်ဟာ သဗ္ဗညုတဥာဏ်ကိုရပြီး ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့ ဂယာမြို့အမည်နဲ့စပ်၍ ဗုဒ္ဓဂယာလို့ ခေါ်ဝေါ်ကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဟာ သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် အမျှဝေတာကို တနှစ်မှာ တကြိမ် နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာလတွေမှာ ဗုဒ္ဓဂယာနဲ့ ဗြာဟ္မဂယာနှစ်နေရာမှာ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ဟာ ဗုဒ္ဓဂယာမှာ လူတွေ အသွားအလာမစဲ အလွန်စည်းကားတဲ့ ရာသီလည်းဖြစ်ပါတယ်။သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် အမျှဝေဖို့ ဗုဒ္ဓဂယာကို လာရောက်ကြတဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဟာ မဟာဗောဓိပင်ရဲ့စနေထောင့်အရပ်ကခရေပင်ပင်းလေးအောက်မှာ ပြန့်ကြဲနေတဲ့ခရေပန်းတွေကို မနှစ်သက်ကြလို့လားဒါမှမဟုတ်သူတို့တွေအတွက် ရာသီပန်းမဟုတ်လို့လား အမြတ်တနိုးကောက်ယူကြတာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒီရာသီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ ခရေပင်တွေအောက်က ခရေပန်းလေးတွေကို အလုအယက်ကောက်ယူနေကြတဲ့ အချိန်ရာသီပဲမဟုတ်ပါလား။ ဒီလိုမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ယောင်မိပြီး အတွေးစိတ်မှာ အမိမြေ မြန်မာပြည်ကြီးကိုလွမ်းဆွတ်သတိရမိပါတယ်။ခုတော့ခရေပန်းလေးတွေကိုမည်သူကမှမမြတ်နိုး၊အရေးလုပ်မည့်သူလည်းမရှိ မကြာမီအမိုက်လှည်းတဲ့ ကုလားကြီးရဲ့အမိုက်တောင်းထဲသို့ ရောက်ရတော့မယ်။
မဟာဗောဓိပင်အောက်မှာ တရားဘာဝနာရှုမှတ် ပွါးများပြီးလို့ မဟာဗောဓိပင်ကြီးကို လှည့်လည်ပူဇော်နေခိုက်စာရေသူရဲ့အနံ့အာရုံကို ခရေပန်းရနံ့လေးတွေကလာပြီးနှုတ်ဆက်နေကြပါတယ်။မွှေးကြိုင်လှတဲ့ခရေပန်းရနံ့တွေကို ရှုရှိုက်ရတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာ ကြည်လင်သွားပြီးစိတ်ချမ်းသာခဲ့ပါတယ်။ခရေပင်အောက် စာရေးသူရောက်သွားတဲ့အခါ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကြနေတဲ့ ခရေပန်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးဘုရားမှာကပ်လှူပူဇော်ချင်တဲ့စိတ်တွေတဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
ဒါနဲ့ဘုရားဈေးမှာပန်းကန်ပြားသုံးချပ်ဝယ်ယူလိုက်ပြီး ခရေပန်းလေးတွေကို အသာလေးကောက်၊ ရေနဲ့သန့်ရှင်းစွာဆေးကြော၍ ပန်းကန်ပြားမှာအသေအချာထည့်ပြီး မဟာဗောဓိစောတီတော်ကြီးရဲ့ လိုဏ်ဂူအတွင်းမှာ ကိန်းဝပ်စံပါယ်တော်မူနေတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွါးဆင်းထုတော်ရှေ့မှာ ရတနာသုံးပါးကို အာရုံပြုကာ ကပ်လှူပူဇော်လိုက်ပါတယ်။မဟာဗောဓိပင်ကြီးရဲ့အနီးတဝိုက်မှာ ခရေပန်းရနံ့တွေဟာမွှေး ကြိုင်သင်းပျံ့နေသလို ပွင့်တော်မူသွားကြတဲ့ ဘုရားအဆူဆူတို့ရဲ့ သစ္စာဓမ္မရနံ့တွေဟာလည်း ဒီနေရာမှာ ပြန့်နှံ့လျက် ယနေ့တိုင် မွှေးကြိုင်နေဆဲမဟုတ်ပါလား။
ဂင်္ဂါဝါဠုသဲစုမက ပွင့်တော်မူသွားကြတဲ့ ဆူဆူထွဋ်ထား မြတ်ဘုရားတွေဟာ ဒီမဇ္ဈိမဒေသ ဗုဒ္ဓဂယာအရပ်မှာပဲ သစ္စာတရားကို သိတော်မူ၍ ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ကြပါတယ်။ ဘတ္တကမ္ဘာအတွင်းမှာ ပွင့်တော်မူသွားကြတဲ့ ကကုသန် မြတ်စွာဘုရားဟာ ဗုဒ္ဓဂယာနေရာ ကုက္ကိုဗောဓိပင်အောက်မှာ သစ္စာလေးပါးကို သိတော်မူ၍ ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ကောဏာဂုမ် ဘုရားရှင်ဟာလည်း ဗုဒ္ဓဂယာနေရာ ရေသဖန်းပင်အောက်မှာ သစ္စာလေးပါးကို သိတော်မူ၍ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ ကဿပဘုရားရှင်ဟာလည်း ဗုဒ္ဓဂယာနေရာ ပညောင်ပင်အောက်မှာ သစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူ၍ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ နောင်ပွင့်တော်မူမယ့် အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင်ဟာလည်း ဗုဒ္ဓဂယာနေရာမှာပဲ ကံ့ကော်ပင် အောက်မှာ သစ္စာလေးပါးကို သိတော်မူ၍ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခု အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဂေါတမဘုရားရှင်လည်း ဗုဒ္ဓဂယာ၊ ညောင်ဗုဒ္ဓဟေ-မဟာဗောဓိပင်အောက်မှာ သစ္စာလေးပါးတရားကို သိတော်မူ၍ သဗ္ဗညုတဥာဏ်ကိုရရှိတော်မူကာ ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားရှင်ဟာ ဘုရားဖြစ်ပြီးလို့ မဟာဗောဓိပင်ရဲ့အနီးမှာ သတ္တသတ္တာဟ(၄၉)ရက် ဖလသမာပတ်ကို ဝင်စားပြီးတဲ့နေ့ ရာဇာယတနသတ္တာဟမှာစံတော်မူစဉ် တပုဿနဲ့ ဘလ္လိကာ ကုန်သည်ညီနောင်နှစ်ဦးကို “ဗုဒံ္ဓသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊” ဒွေဝါစိကသရဏဂုဏ်ရနံ့တွေကို စတင်ပြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ရာဇာယတန-လင်းလွန်ပင်နေရာမှနေ၍ အဇပါလဆိတ်ကျောင်းညောင်းပင်ရင်းသို့ပြန်ကြွချီ
တော်မူကာ နှစ်ရက်သုံးရက် စံနေတော်မူပြီး အဲဒီကနေ ဓမ္မရနံ့တွေစတင်ပြန့်ဝေဖို့ (၁၈)ယူဇနာ ၁၅၇-မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ ဗာရာဏသီမြို့အနီးက ဣသိပတနမိဂဒါဝုန်တောသို့ ခြေလျင်ခရီး ကြွချီတော်မူပါတယ်။ မိဂဒါဝုန်တောသို့ရောက်တော်မူတဲ့အခါ ဝါဆိုလပြည့်စနေနေ့ ညနေ ‘နေ’ကအဝင်၊ ‘လ’ ကအထွက် ရွှေရောင် ငွေရောင်တောက်ပနေတဲ့ အချိန်မှာ ပဉ္စဝဂ္ဂီငါးဦးတို့အား ဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုတ်တော်ကို တရားဦးဟောကြားတော်မူပါတယ်။
ဘုရားရှင်ထံတော်မှ ဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုတ္တန်တရားဒေသနာတော်ကို နာကြားပြီး၍ နာကြားတဲ့အတိုင်း ကျင့်သုံးပွါးများကြတဲ့အတွက်ကြောင့် ပဉ္စဝဂ္ဂီငါးဦးထဲမှာ ကောဏ္ဍညဟာ သစ္စာလေးပါးကို ပထမဦးဆုံး ကိုယ်တိုင်သိ၍ သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့မှာဝပ္ပ၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်နေ့မှာ ဘဒ္ဒိယ၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၃)ရက်နေ့မှာ မဟာနာမ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၄)ရက်နေ့မှာ အဿဇိ အစဉ်အတိုင်း သောတာပန်ဖြစ်ကြ၍ “ဧဟိဘိက္ခု”ရဟန်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာပင် မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာ သံဃာရတနာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး မဟာသက္ကရာဇ်-၁၀၃-ခုနှစ်၊ဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၄)ရက်နေ့ဟာ သာသနာတော်ကြီးမှာရတနာသုံးပါးစုံတဲ့နေ့လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပဉ္စဝဂ္ဂီငါးဦးတို့ဟာဓမ္မစက္ကပ၀တ္တနသုတ်တော်ကိုနားကြားပြီး၍ သောတာပန်မျှသာဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ ရဟန္တာမဖြစ်ကြသေး။ ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်(၅)ရက်နေ့မှာ ဘုရားရှင်ကအနတ္တလက္ခဏသုတ်တော်ကိုဆက်
လက်ဟောကြားလိုက်တဲ့အခါပဉ္စဝဂ္ဂီငါးဦးလုံးအာသဝေါကင်းကွာရဟန္တာဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာ ယခင်က အတ္တကို အရှိထား၍ အရိသစ္စာကိုရှာဖွေနေသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ယခုတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကို နာကြားရ၍ အတ္တဆိုတာမရှိ၊ ဒုက္ခသာရှိကြောင်းကို ပိုင်းပိုင်းခြားခြား သိမြင်ကြပြီး အတ္တဝါဒကြီးကို ပယ်ကြပေပြီ။ အရိသစ္စာတရားကိုလည်း ကောင်းစွာသိ၍ နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြပေပြီ။ ဒီလိုထူးခြားမွှေးကြိုင်လှတဲ့ဓမ္မသတင်းစကားကို ကြားရတဲ့အခါ ဗာရာဏသီမြို့သူမြို့သားတွေဟာအံ့သြမှုတွေဖြစ်ကြပြီး ယဿသူဌေးသားနဲ့ သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါသူငယ်ချင်း ငါးဆယ်ငါးယောက်တို့ဟာ ဘုရားထံမှောက် လာရောက်၍ တရားနာကြားပြီးနောက် ရဟန်ပြုကာ ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ဘုရားရှင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ သတင်းစကား မွှေကြိုင်လှတဲ့ အနှိုင်းမဲ့မ္မရနံ့တွေဟာ ဗုဒ္ဓဂယာ၊ မဟာဗောဓိပင်ကြီးရဲ့အနီးတ၀ိုက်မှာ ပန်းခရေရနံ့တွေ မွေးကြိုင် သင်းပျံ့နေသလိုဗုဒ္ဓဂယာမှသည်မိဂဒါဝုန်၊ မိဂဒါဝုန်မှသည် စကြ၀ဠာလောကဓာတ်တစ်ခုလုံးသို့်သင်းပျံ့မွှေး
Posted by ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်နန္ဒသာရ at 11:50 AM No comments: Links to this post
သီတဂူဆရာတော် နှင့် ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်နန္ဒသာရ(မဇ္ဈိမဒေသ)
Posted by ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်နန္ဒသာရ at 10:35 PM No comments: Links to this post
ခွန်အားဖြည့် ဓမ္မ စာသားများ
80/UNfyAigazkI/AAAAAAAABMk/v1oJqY5YbE8/s1600/nbtre.jpg" imageanchor="1" style="margin-left:1em; margin-right:1em">
Posted by ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်နန္ဒသာရ at 10:22 PM No comments: Links to this post
Posted by ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်နန္ဒသာရ at 10:04 PM No comments: Links to this post
မြန်မာနိုင်ငံမှ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များ
ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်နန္ဒသာရ(မဇ္ဈိမမြေ) ven.nandasara11@gmail.com
" ကုသိုလ်အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာ မလုပ်ချင်ပေမဲ့ ပေပြီးလုပ်ရတယ်။ အကုသိုလ်အလုပ် မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာ လုပ်ချင်ပေမဲ့ မလုပ်ဘဲအောင့်ပြီး နေရတယ်။"
ထိချက်ပြင်းသော အဆုံးအမများ (1)
ဓမ္မကထိက ဧတဒဂ်ဘွဲ့ရ အရှင်ပုဏ္ဏမထေရ် (1)
ပန်းခရေရနံ့တွေ မွှေးကြိုင် သင်းပျံ့နေ (1)
ဘဝရဲ့ အပိုင်းအစများ (10)
ဘုရားမိန့်မှာ ဒေသနာ။ သူတော်ကောင်းဆိုတာ ဘယ်သူလဲ (1)
မှတ်သားဖွယ်ရာ အချို့ (3)
အပ္ပမာဒ ဓမ္မရသ မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခြင်းခံရသော ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ပုဒ် (1)
အပ္ပမာဒ ဓမ္မရသ မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခြင်းခံရသော ဆောင်းပါးကောင်းနှစ်ပုဒ် (1)
အများကောင်းကျိုး ကိုယ့်ကောင်းကျိုး (1)
၉၆၉-ဆိုတာ ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူး။ သူများဘာသာကို လိုက်ပြီ...
ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်၏ထုတ်ဝေ ပြီးသောစာအုပ်များ
ဓမ္မဒါယာဒ အရှင်၏ထုတ်ဝေ ပြီးသောစာအုပ် .......................................... ယနေ့ငွေလဲလှယ်နှုန်း .......................................... .......................................... ဘဝဆိုတဲ့လှေ ..........................................
လှေ စက်မရှိရင် ရွက်လွှင့် ရွက်မရှိရင် တက်နဲ့လှော် တက်မရှိရင် လက်နဲ့လှော် ကမ်းကိုမရောက်မချင်း...
ဖိနပ်ချုပ်သူတွေ ဖိနပ်အချုပ်တော်ရတာက သူတို့တွေဟာ တခြားအလုပ်ကိုမလုပ်ပဲ ဖိနပ်ပဲချုပ်နေခဲ့လို့ပဲ”
သံဝေဇနိယလေးဌာနကို ဖူးမြော်ကြည်ညိုခွင့်ရရှိကြ လေပြီ
ယေဟိ ကေစိ အာနန္ဒာ စေတိယစာရိကံ အာဟိဏ္ဍန္တာ ပသန္နစိတ္တာ ကာလံ ကရိဿန္တိ၊ သဗ္ဗေတေ ကာယဿ ဘေဒါ ပရံ မရဏာ သုဂတိံ သဂ္ဂံ လောကံ ဥပပဇ္ဇိဿန္တီတိ။(မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်၊ မဟာဝဂ္ဂပါဠိတော်) ချစ်သား အာနန္ဒာ…..သံဝေဂယူဖို့ရန်၊ သံဝေဂယူနိုင်ရန် သံဝေဇနိယ လေးဌာနဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေက…. ၁-ငါဘုရား ဖွားမြင်တော်မူတဲ့နေရာ လုမ္ဗိနီ ဥယျာဉ်ဌာန။ ၂-ငါဘုရား သမ္မာသမ္ဗောဓိဥာဏ်ကို ရတော်မူတဲ့ နေရာဌာန။ ၃-ငါဘုရား ဓမ္မစကြာတရားဦးကို ဟောတော်မူတဲ့နေရာ မိဂဒါဝုန်ဌာန။ ၄-ငါဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူတဲ့နေရာ ကုဿိန္နာရုံဌာန တို့ဖြစ်ကြတယ်။ သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံကြတဲ့ သူတွေဟာ ဒီသံဝေဇနိယလေးဌာနရှိ စေတီပုထိုးတွေကို သွားလာလှည့်လည် ဖူးမြော် ပူဇော်ကြလိမ့်မယ်။ သံဝေဂယူကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီသူတွေဟာ ဘုရားဖူးဆဲမှာလည်းကြည်လင်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်။ ဘုရားဖူးပြီးနောက်လည်း ဘုရားပုထိုးများကို အမှတ်ရ အာရုံပြု၍ ကြည်လင်တဲ့စိတ်ရှိကြတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ် ပျက်ဆီး၍ သေပြီးတဲ့အခါ ကောင်းတဲ့နေရာ နတ်ပြည်တို့သို့ ရောက်ကြရမယ်။
"လောကမှာ အစားထိုးလို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ် အဲဒါမိဘနဲ့အချိန်ပဲ"
" ပါရမီဆိုတာ မွှေးရာပါစွမ်းရည် ၁-ဆကို ကြိုးစားမှု ၉၉-ဆနဲ့ ပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်"
နတ္ထိ ရာဂသမော အဂ္ဂိ၊ နတ္ထိ ဒေါသ သမော ကလိ၊နတ္ထိ ခန္ခသမာ ဒုက္ခာ၊ နတ္ထိ သန္တိပရံ သုခံ။“ရာဂနှင့်တူသော မီးမရှိ၊ ဒေါသနှင့်တူသော အပြစ်မရှိ၊ခန္ဓာနှင့်တူသော ဆင်းရဲမရှိ၊ နိဗ္ဗာန်နှင့်တူ သော ချမ်းသာမရှိ”။
There is no fire like lust; there is no stain like anger; there is nothing so painful as the aggregates; and there is no happiness greater than the perfect calm.
ဖေမြင့် _ ဘေဘီလုံမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်
ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော် _ သုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန်
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့်ခေတ်သစ်ဘ၀
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ တော်ကူးဆရာတော် ဘ၀ဆည်းဆာနှင့် ကျင့်စဉ်တရား
ဆန်းလွင် _ ကမ္ဘာ့တွေးခေါ်ရှင်ကြီးများ
ဆန်းလွင် _ ရတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်လူသတစ်ယောက်အကြောင်ူး
ဂျာနယ်ကျော် မမလေး _ သွေး
ဇော်ဂျီ _ ညီသစ်ဆင်းကဗျာစု
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ရှေးဘ၀နောက်ဘ၀ သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများ
ရဝေနွယ် _ ရုပ်လှချင်ရင်
အရှင်ကောဝိဒ _ တုနိုင်းမမှီ
၀င်းသိန်းဦး _ ရှေ့ဘ၀နောက်ဘ၀ဗုဒ္ဓမဝေဖန်နှင်
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ သိပ္ပံအမြင်နှင့်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအမေးအဖြေများ
ဦးဌေးလှိုင် _ ရဟန္တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ
ဦးထွန်းလှ _ ရွေးချယ်ရမည့်မိန်းမကောင်း. ရှာဖွေရမည့်ဇနီးလောင်း
ဦးရွှေအောင် _ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ပေါ်ထွန်းခြင်း
ဦးရွှေအောင် _ ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ်
ဦးစိုးလွင် _ အစ္စလာမ့်အတိတ်သမိုင်းမှ အယူဝါဒဆိုင်ရာအရှုပ်အထွေးများ
အောင်သင်း _ အမွေ
အရှင်သီဟာဘိဝံသ _ မေတ္တာဘာဝနာရှုဖွယ်ကျမ်း
အရှင်ဆန္ဒာဓိက _ မိဘကျေးဇူးအကျေဆပ်နည်း
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ အနာဂတ်သာသနာရေး
အရှင်ဃောသိတ _ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တစ်ဘ၀သာသနာ
အရှင်ဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ _ ဓမ္မချမ်းသာတွေ့အောင်ရှာ